Indawo entle eCorris kufutshane nezinto eziluncedo (inja e-1 elungileyo yamkelekile)
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSue & Steve
I-Troed-y-Rhiw yindawo ebekwe kakuhle enamatye enamatye e-1 ekwilali yemigodi yaseCorris kumda osemazantsi we-Snowdonia National Park. It has ulonwabo ekhaya kuquka isitovu iinkuni kunye digital freeview TV / DVD. Ikwanekhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nemicrowave, isitya sokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba. Igumbi lokuhlambela lineshawa yombane ye-thermostatic phezu kwebhafu. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu okanye ezimbini. Kukho igadi yabucala enogcino olukhuselekileyo lweebhayisekile zeentaba.
Le ndlu yakudala yakhiwe ngesileyiti kunye nelitye kwaye imalunga ne-170 leminyaka ubudala. Isanda kulungiswa, igcina iimpawu ezininzi zabalinganiswa. Imigangatho esezantsi inamatye eflegi yesileyiti, ngoko unokufuna ukuzisa iziliphu zakho. Kukho igadi encinci ekhuselekileyo enebhedi yemifuno onokuthi uyisebenzise (ngexesha lonyaka). Inetafile nezitulo phantsi kweveranda nto leyo ethetha ukuba unokuyonwabela indawo engaphandle kuyo yonke imozulu.
Siyathemba ukuba uya kusisebenzisa kwisakhiwo esidala samatye esinokukhanya kombane kunye namandla. Ikwanayo nokukhanya kwendalo okulungileyo, ke inokusetyenziswa njengestudiyo okanye nje isakhiwo esikhuselekileyo sokugcina iibhayisekile njl.njl
Ilali ine-pub eyamkelekileyo, i-Slaters Arms inika ukutya okuphekwe ekhaya, ii-ales zokwenyani kunye nokhetho lweegins. Kukho i-cafe kwiiVenkile zase-Idris ezigxile kwi-vegan, imifuno / ukhetho olunempilo, iikofu ezikhethekileyo njl kunye nokuthengisa ngaphandle, kunye nokukhetha okulungileyo kokutya. Zombini i-pub kunye neeVenkile ze-Idris zineWiFi.
ICorris yilali encinci ebekwe ngaphakathi kweDyfi Valley entle, ebonelela ngobutyebi bezinto ezinje ngokuhamba, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile intaba, ukunyuka intaba kunye nokuhlola, konke kumnyango wakho. Iilwandle ezinesanti zikwisiqingatha seyure kuphela. Umgama omfutshane ukusuka kwilali yiCorris Craft Centre kwikhaya laseKing Arthur's Labyrinth kunye neDyfi Gin Distillery eyaziwayo, eyimfuneko kubathandi begin. Kukho i-assortment entle yeevenkile zobugcisa kunye nevenkile yokutyela. ICorris ikwanayo nololiwe wayo onomphunga kunye nemyuziyam kwilali apho uya kufumana ipaki yemoto yasimahla. Ezantsi nje kwendlela liZiko elidumileyo leTekhnoloji yoBunye, kwaye kungekudala iza kuba yiDyfi Bike Park edumileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sue & Steve
We’re married, and Sue is actually the “Superhost”, and is your main point of contact. We have 3 grown up children, and 6 grandchildren, or 7 if we include Ralphy the Staffordshire bull terrier. We spend most of our time in Corris, enjoying what the local area has to offer. I also enjoy competing in the British Sidecar Trials Championship.
We’re married, and Sue is actually the “Superhost”, and is your main point of contact. We have 3 grown up children, and 6 grandchildren, or 7 if we include Ralphy the Staffordshire…
Nceda usazise kwangaphambili ukuba ufuna iibhedi ezingamawele. Sihlala kufutshane kwaye sonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye ukujongana nazo naziphi na iingxaki ngexesha lokuhlala kwakho. Ungafowunela nabani na kuthi nangaliphi na ixesha.
Nceda usazise kwangaphambili ukuba ufuna iibhedi ezingamawele. Sihlala kufutshane kwaye sonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye ukujongana nazo naziphi na iingxaki ngexesha…
USue & Steve yi-Superhost